Biby fiompy | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Biby fiompy
Ny kisoa dia ny hena: mamantatra ireo karazana vokatra tsara indrindra
Misy kisoa efa natsangana mba hamokarana tavy. Kanefa, mbola tsy ampy sakafo sy tsiro ny fihinanana kisoa. Mihinam-boa no ampiasaina mba hanangonana sakafo maromaro manerana izao tontolo izao, ny Miozolomana ihany no tsy mihinana azy. Amin'ny ankapobeny dia mifaninana amin'ny akoho izy, fa ny farany kosa dia ambany noho ny henan-kisoa.
Ny kisoa androany no biby malaza sy malaza indrindra. Nahoana? Raha manisy kisoa ianao, dia manana matavy sy hena ianao, izay tsy mihatra amin'ny ankamaroan'ny olona. Miaraka amin'izany rehetra izany, ny kisoa dia afaka mahazo koa. Saingy, alohan'ny hanapahanao hevitra momba ny dingana famokarana kisoa, dia misy foana ny fanontaniana momba ny fotokevitra: iza no misafidy?
Ny endriky ny fandrobana ombivavy iray ho an'ny ronono avo lenta
Ny fananana ombivavy iray ao an-trano dia tena mahasoa, satria ity biby ity dia afaka mankafy ny fianakaviana manontolo miaraka amin'ny vokatra azo avy amin'ny ronono. Na izany aza, mba hahazoana azy ireo dia zava-dehibe ny tsy mikarakara sy mamelona ny biby fiompinao, fa koa ny mikarakara azy tsara. Toa tsotra fotsiny - fa ny habetsaky ny ronono sy ny fepetra ankapobeny misy ny vatan'ny omby dia miankina betsaka amin'ny teknikan'ny milina.
Kitapo mena vita amin'ny mena
Anisan'ireo karazam-borona maro dia sarotra ny mahita ireo izay mety amin'ny karazana fampisehoana, ary amin'ny toetry ny fampifanarahana amin'ny toetr'andro sy ny sakafo ilaina. Noho izany, alohan'ny hanombohana safidy toy izany, dia mendrika ny hanombanana ny fahaiza-manaonao sy ny zavatra ilaina aloha ianao amin'ny voalohany, ary avy eo dia manombatombana ny isam-borona tsirairay avy amin'ny toetoetrany tokana.
Ny fiompiana kisoa ao an-tokantrano: aiza no hanombohana ny vokatra tsara?
Tsy sarotra loatra ny mahazo ny fihinanana henan-tsakafo vaovao sy avo lenta. Ankoatra izany, maro ireo olona tonga amin'ny fanapahan-kevitra hiditra amin'ny famokarana kisoa an-trano, indrindra raha matetika izy ireo no mahita vokatra avy amin'ny hena sy ny vokatra "tsy mamy voalohany". Noho izany, ny zava-niainan'ny trano fandraisam-bahiny toy izany dia noraisina be dia be, izay mahatonga izany na dia eo amin'ny sehatry ny hevitra ho fampiofanana tsara, ary koa mba hianatra ny fiheverana sy ny tsy fisian'ny kisoa.
Ny biby toy ny fambolena toy ny ombivavy dia heverina fa mpahazo ny firenena rehetra. Any amin'ny firenena sasany, io biby io dia azo jerena amin'ny toetry ny fanjakana. Ary ao India, amin'ny ankapobeny, ny ombivavy dia raisina ho biby masiaka. Amin'izao andro iainantsika izao dia misy karazana omby maro. Ireo biby ireo dia tsy natokana ho an'ny vokatra avy amin'ny vokatra, fa ho an'ny hena ihany koa.
Ao amin'ny fiainana an-tanànan'ny mponina, ny biby mahazatra indrindra dia ombivavy. Azonareo alaina sary an-tsaina ny zoo iray izay itehirizana biby fiompy: ombivavy, osy, kisoa ary biby hafa. Eto amin'ity izao tontolo izao ity, mbola misy zoo toy izany. Any amin'ny Repoblika Federalin'i Alemana no misy azy, betsaka ireo zoo, satria ho an'ny sasany, ny zoo dia manome fahafahana hijery ireo biby fiompy voalohany.
Ny taninay dia manana ala sy ahitra tsara toy izany, miadana ny toetrantsika, ary izany rehetra izany dia midika fa tsy misy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny omby omby. Ity orinasa ity dia tsy mitondra tombony kely ho an'ny tompony. Mba hanamboarana ombivavy dia tsy mila vola be. Betsaka ny karazana omby amin'ny omby, fa ato amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny zana-borona Shorthorn.
Mamahana kisoa: manao ny sakafo tsara indrindra isika ary misafidy ny teknolojia marina.
Amin'ny efitra, loharano ary hafanam-po, dia mora ny manangana kisoa ao an-trano. Na izany aza, na dia nandray fanapahan-kevitra toy izany aza ianao, dia mila miezaka mikarakara ny biby fiompinao. Na izany aza, na dia tsy mandeha amin'ny sakafo omena azy aza ity biby ity, raha te hahazoana vokatra tsara dia tsy maintsy miomana tsara ianao.
Ny omby betsaka indrindra: inona moa izany?
Ny solontenan'ny omby dia natokana nandritra ny fotoana ela. Ao amin'ny tokotanin'ny tanàna maro dia mahita omby vavy ianao, izay tena tian'ny tompony. Hatramin'izao dia efa mihoatra ny 1200 ny fiompiana omby no voasoratra anarana manerana izao tontolo izao, saingy misy amin'izy ireo dia misy ny fanavahana ny endriky ny siramamy, ny hena, ny sakafo ary ny hena.
Yaroslavl mitahiry ombivavy
Ny Milk no tena vokatra atolotr'ity fiainana ity. Izy io dia afaka mampita ny fitaovana ilaina indrindra ho an'ny fiainana sy ny fampandrosoana. Izany no mahatonga ireo mpamboly biby fiompy maro manosotra ombivavy mavo. Ny ombivavy toy izany, na dia tsy mitahiry rano aza, dia afaka mampifaly ny tompony amin'ny rendrarendra tsara sy matavy tsara.
Betsaka ny ombivavy mavo
Tsy mora ny mividy ombivavy iray. Amin'ity resaka ity dia tsara ny mamantatra fampahalalana betsaka araka izay azo atao mikasika ireo omby tsara indrindra noforonina manokana mba hahazoana ronono avy amin'izy ireo. Tokony hanombatombana koa ny hakanton'ireo karazana voafantina rehetra. Ny tsara indrindra dia ny mamantatra ny karazana zaridaina aty amin'ny orinasam-pambolena eo an-toerana, ary ny fividianana ombivavy iray tena ompiana izay atodika any.
Vola fiantohana: ahoana no hamahana biby
Alohan'ny hividianana ombivavy ronono dia ilaina ny mamantatra ny karazan-tsakafo tokony homena ny omby, satria miankina amin'ny fihinanana, ny habetsaky ny ronono izay azo avy amin'ny biby iray. Ny fikarakarana sakafo koa dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny dingan'ny fitehirizana ny fiterahana.
Cow Highland Cow
Rehefa misambotra biby fiompy isika, dia mieritreritra foana ny fomba hanatsorana ny vola sy ny fotoana iantsoana ny vokatra tsara amin'ny hoavy. Matetika anefa ny vokatra tsara dia vokatry ny trano iray matanjaka be, rehefa misy karazana fitaovana fikarakarana, fitsaboana manokana sy fikojakojana azo ampiharina amin'ny biby.
Keshakh fotsy hoditra
Be dia be ny ombidia, ary sarotra be ny mahita azy ireo ho an'ny toetra rehetra ho anao. Ny famaha ity asa sarotra ity dia tsikelikely, rehefa avy namaky tamin'ny an-tsipiriany ny famaritana ny zaridaina malaza indrindra. Izany no sokajin'ny olona malaza indrindra ahitana ny ombivavy amin'ny karazan-tsakafo karazana fototarazo Kazakh.
Kalmyk voady ombivavy ankehitriny no heverina fa tsara indrindra amin'ny sakafon'ny hena. Ity biby fiompy ity dia tena tsara ho an'ny biby fiompy any amin'ny faritra misy toe-piainana henjana, fa mora ihany ny mikarakara any amin'ny faritra misy toetr'andro mora kokoa. Tena tsy mitovy amin'ny biby fiompy Eoropeana ny biby, satria ombivavy be omby ny razany.
Zaza kambana mainty sy fotsy
Angamba eo anivon'ireo ombivavy rehetra voam-bolo dia manana laza malaza indrindra. Raha ny marina, ireo biby ireo dia afaka mampifaly anay isanandro miaraka amin'ny fahazoan'ny habaka, ary matetika koa izy ireo no mihinana hena, ary ny vatom-panafody azo avy amin'izy ireo ihany koa dia manana lanjany lehibe. Matetika ny ombivavy dia alefa any amin'ny toeram-piompiana lehibe izay manome ny ronono ho an'ny zavamaniry lehibe.
Ahoana ny fomba fiompiana omby tsara
Rehefa mividy omby na biby efa lehibe ianao, dia azo antoka fa te hahazo vokatra amin'ny endriky ny hena sy ny vokatra avy amin'ny vokatra. Mba hahazoana ny vokatra ampy tsara, ny omby dia tokony hohanina tsara. Saingy misy karazan-tsakafo marobe, izay samy manana ny toetrany manokana.
Fantaro ny endriky ny fiompiana sy ny fikojakoan'ny omby vavy
Isika rehetra dia zatra amin'ny maha-solontenan'ny omby antsika. Ny fikojakojana ny biby toy izany dia zava-manahirana be, satria mila manome toeram-ponenana sy trano maotina ary sakafo be dia be. Saingy inona no tokony hatao raha toa ka mila ronono maimaim-poana, alika maitso, tranom-bokatra sy tsiro maitso ianao!
Ny aretina ho an'ireo ombivavy: ahoana no hamantarana sy hanasitranana
Tantsaha tsara no mahafantatra fa tsy ny soavaly ihany, fa ny ombivavy ihany koa no mila mijery ny takolany. Tokony hodinihina manokana io vatana io amin'ny ririnina, rehefa mandany ny ankamaroan'ny fotoana ao an-trano ilay biby. Amin'ny fahavaratra dia tsy misy olana amin'ny fako sy ny fanadiovana ny vala, satria iharan'ny tsy fahampiana voajanahary izy ireo.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Biby fiompy